Jizerské hory - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
Sushi bụ olulu na dike na Osimiri Černá Desná. Ọ dabere na Labe River Board, ụlọ ọrụ nwe obodo, nke dabeere na Hradec Králové. A na-arụ ọrụ na mmiri mmiri site na osisi Jablonec
Paseky nad Jizerou si n'elu
Paseky nad Jizerou lee site na elu nke 06.04.2018. Paseky nad Jizerou bụ obodo nta nke dị n'ógbè Semily, nke dị na Liberec, n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains n'ókè nke ugwu Jizera, n'akụkụ aka nri nke Ugwu Jizera
blog, Giant Mountains, ugwu, video	 17.1.2018
Paseky nad Jizerou bụ obodo nta nke dị n'ógbè Semily, nke dị na Liberec, n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains n'ókè nke ugwu Jizera, n'akụkụ aka nri nke Jizera Mine. Ndị bi na 252 bi ebe a; ọnụ ọgụgụ ụlọ na
blog, Giant Mountains, ugwu, video	 12.1.2018
EMBA ncha. s ro bụ ụlọ ọrụ Czechoslovakia na ókèala n'etiti nnukwu ugwu na ugwu Jizera. Mmalite nke ụlọ ahịa pastry ahịa na Paseky nad Jizerou jikọtara ya na afọ nke 1882, mgbe e nwere ụmụnna
Příchovice, mgbọrọgwụ, Giant Mountains
Příchovice (German Stephansruh ma ọ bụ Prichowitz) bụ obodo, akụkụ nke obodo nta Kořenov na Jablonec nad Nisou district. Ọ bụ maka 3 kilomita n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke Kořenov. Enwere adreesị 279 edenyere aha.